FACEBOOK မှာ Hi.. နေတုန်းးးးးးးးးးး ~ White Angel
FACEBOOK မှာ Hi.. နေတုန်းးးးးးးးးးး
10:57 AM အဖြူရောင်နတ်သမီး 16 comments
ကျမ အခုပဲ အိပ်ယာနိုးလို့ FACEBOOK ကို ဖွင့်လိုက်တာ.. chatting တွေ ထပ်တက်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်..။
ကျမ မဟုတ်ပဲ စက်က သူ့အလိုလို ON LINE မှာ ရှိတဲ့သူတွေကို AUTO ... “Hi..” နေတာများလား??? ဒါမှမဟုတ် ပါ့စ်ဝေါ့ပြောင်းထားပြီးသော်လည်း မသမာသူဟာ ကျမရဲ့ ACCOUNT ထဲမှာ ရှိနေဆဲလားဆိုတာကို ကျမလည်းမသိပါ။
FACEBOOK ထဲမှ သူငယ်ချင်းများရှင့်..
FACEBOOK တွင် ကျမ ဘက်မှ “Hi..” လာခဲ့ပါလျှင် ပြန်မ“Hi...” မိပါစေနဲ့..
ကျမ မဟုတ်ပါကြောင်း.. ထပ်မံ အသိပေးပါရစေရှင့်..
ဘယ်လိုအညှိုးနဲ့များ လိုက်နှောက်ယှက်နေလဲဆိုတာ စဉ်းစားလို့ကို မရဘူးးးးးး
wanna laugh ? :)))
12 hours agoSent from Chat
no , i don't want , i know that is virus :))
really !! I already know that before send virus link , regularly ask wanna laugh? If i answer sure, then auto send virus link !! :))
3 hours agoSent from Chat
2 hours agoSent from Chat
ကျနော် အင်္ဂလိပ်စာ မတက်ဘူး
ဘာတွေ တင်ထားသေးတုန်း..comment ပေးမယ်
Min Kha Kha
တော်ကြာ ကျွှန်တော့် စက်ကလေး ပိုးကိုက်ခံနေရဦးမယ်...:D
5 hours agoSent from Chat
thanks...but , i can't laughing now.
see u net time.
next time....next ........
ကျမ ထင်တာတော့ Auto လိုက်ဖြေနေတာလားလို့...၊ ဟိုတခါ ဘလော့ဂ်ကာတယောက် ဖြစ်ဖူးတယ်လေ..၊ မေးတာနဲ့ ဖြေတာနဲ့ တလွဲတွေလေ..(ကိုဇော်လား) နာမည်မေ့နေပြီ..။
Posted in: အရေးပေါ်
နတ်သာမီးရေ...ဖဘမှာ လာပြီး ဟိုင်းလုပ်နေတယ် ပြန်တုတ်ပစ်လိုက်ရမလား...။ ဘေးမှာထိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းလဲ နတ်သမီးထဲမှာရှိတယ် သူ့ကိုအရင် ဟိုင်းလုပ်နေတာ ပြန်ပြောနဲ့လို့ မနည်းဘရိတ်အုပ်ထားရတယ်...။ အဲဒါ နတ်သမီးအတုလို့....။ သူတော်တော်သောင်းကျန်းနေတယ် ဂန်းမသားလေး..။
ဟင်...ဘယ်လိုဂျီးလဲ နားကိုမလည်ပါဘူးဆို ရှုပ်နေဆဲပဲ။ အဲဒီအကောင့်ကို နတ်သမီးရော သူရော သုံးနေသလား။ နတ်သမီးကလုံးဝ သုံးမရတော့ပဲ (ဖေ့ဘွတ်ပြောပါတယ်) သူကပဲ သုံးနေတာလား။ ဒွတ်ခပါပဲ.. အဲဒီမေးလ်ကရော အခုဘယ်သုံးနေတာလဲ.. နတ်သမီးကရော ဘယ်လိုသိလဲ..ဘာမှ မသိပါဘူးဆို ကွယ်.. နတ်သမီးကိုတော့ ဗွမ်းထားတယ်နော်... ဟင့်ဟင့်... စိတ်ညစ်လိုက်တာကွယ်
အရေးကြီးတာက ဗိုင်းရပ်နဲ့ဟဟ်ကာတွေရဲ့အလစ်အငိုက်ကို မခံရဖို့ပါပဲ ။ အစ်မရဲ့ ဆာဗာကိုစစ်ဆေးဖို့လိုသလို ၀င်းဒိုးတွေအသစ်ပြန်တင်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲ ။ နည်းအမျိုးမျိုးစမ်းကြည့်ကြတာပေါ့ ။ ဖိုက်တင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးး
one go two come ပေါ့နော..အစ်မရယ်
မ အကောင့် အသစ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါလား... အဟောင်းကတော့ နှမြောစရာကြီးနော်.. သိပ်တော့နားမလည်ဘူး.. ဘာဖြစ်လို့ လိုက်နှောင့်ယှက်တာလဲ မသိဘူး...နော်
ဟိုင်း နတ်သမီးးး ဟိုင်းးးး
သူတို့ က နာတို့နတ်သမီးကို မဟိုင်း ဟိုင်းအောင် ယတြာ ချေ နေကြတာ ဖြစ် မယ်...( အပြိုဟိုင်းကြီး ဖြစ်စေချင် တာ ထင်တယ် ) ..
ကဲ.. ကဲ..သကောင့်သားတွေကို ပြန်ပြီး ပညာ ပြ လိုက် စမ်း ဘာာာာာ ။
ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်က ကိုယ့်နာမည်နဲ့ ချက်နေတာစိတ်ထဲတော်တော်နေလို့ခက်မှာဘဲ ကိုယ်ချင်းစာမိတယ်။
စိတ်ညစ်မနေပါနဲ့ နတ်သမီးရယ်။ စိတ်ညစ်တာဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ပိုပြီးထိခိုက်နစ်နာ စေတယ်လေ။ ဒီထက်ဆိုးတဲ့ အဖြစ်သနစ်တွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေအကြောင်း စဉ်းစားလိုက်ရင် ခံစားရသက်သာသွားမှာပါ။
စိတ်မကောင်းဖြစ်တိုင်း စိတ်ဆင်းရဲတိုင်း လူသားအားလုံးကို မေတ္တာများများပို့ပေးလိုက်ပါနော်။
ဒီဗိုင်းရပ်က လူချောလူလှတွေကိုဘဲ ရွေးပြီး ကိုက်တယ် ထင်ပါ့။း)))
ကိုအောင်ရဲ့ တစ္ဆေသရဲတွေ ကြောင့် ဖြစ်မယ် ထင်တယ်
ဟိုတလောက အဲဒါတွေကြားလိုက်တယ်။ ဖေ့ဘွတ်က ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုပြီး။ ဒီမှာပဲလာ ဟိုင်း မယ်နော်။ ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲ မသိဘူးနော်။